ကိုဩဒိနိတ်: 25°30′N 51°15′E﻿ / ﻿25.500°N 51.250°E﻿ / 25.500; 51.250
دولة قطر (အာရပ်)
နိုင်ငံတော် သီချင်း: السلام الأميري
အာရေဗျကျွန်းဆွယ်ပေါ်ရှိ အစွန်းထွက်နေသည့် ကာတာနိုင်ငံ၏ တည်နေရာ
— ၁၈% ပါကစ္စတန်
— ၁၈% အိန္ဒိယ
၆၅.၅% အစ္စလာမ် (တရားဝင်)
အကြွင်းမဲ့ ဘုရင်စနစ်အောက်ရှိ ပြည်ထောင်စု တစိတ်တပိုင်း စည်းမျဉ်းခံဘုရင်စနစ်
ခါလစ်ဒ် ဘင် ခါလီဖာ
၁၈၇၈ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၁၈ ရက်
၁၉၇၁ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ ၁
၁၉၇၁ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ ၃
၁၁,၅၈၁ km2 (၄,၄၇၁ sq mi) (အဆင့်: ၁၅၈)
၂,၇၉၅,၄၈၄ (အဆင့် - ၁၃၉)
၁၇၆/km2 (၄၅၅.၈/sq mi) (အဆင့် - ၇၆)
$၃၅၇.၃၃၈ ဘီလီယံ (အဆင့် - ၅၁)
$၁၃၈,၉၁၀ (အဆင့် - ၄)
$၁၈၃.၈၀၇ ဘီလီယံ (အဆင့် - ၅၆)
$၆၆,၂၀၂ (အဆင့် - ၆)
အလွန်မြင့် · ၄၅
ကာတာ ရီယယ် (QAR)
ကာတာ နိုင်ငံ သည် အနောက် အာရှတွင် တည်ရှိသော နိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံ ဖြစ်သည်။ အာရေဗျကျွန်းဆွယ်၏ အရှေ့ မြောက်ဘက်တွင် ရှိသော ကာတာ ကျွန်းဆွယ်လေး ပေါ်တွင် တည်ရှိသည်။ ကုန်းတွင်းနယ်နိမိတ်အားဖြင့် ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံ နှင့် တောင်ဘက်တွင် ထိစပ်လျက် ရှိပြီး ကျန်ရှိသော နယ်နိမိတ်များမှာ ပါရှန်းပင်လယ်ကွေ့က ဝန်းရံလျက် ရှိသည်။ အနီးအနားရှိ ကျွန်းနိုင်ငံ ဖြစ်သော ဘာရိန်းနိုင်ငံ နှင့် ပါရှန်းပင်လယ်ကွေ့ ရေလက်ကြားက ပိုင်းခြားထားသည်။
အော့တမန်အင်ပိုင်ယာ၏ အုပ်ချုပ်မှုအောက်တွင် ရှိခဲ့ပြီးနောက် ၂၀ရာစု အစောပိုင်းတွင် ကာတာတို့သည် ဗြိတိသျှတို့၏ အစောင့်အရှောက်ခံနယ်မြေအဖြစ် ရှိခဲ့သည်မှာ ၁၉၇၁ ခုနှစ် လွတ်လပ်ရေး ရသည် အထိပင် ဖြစ်သည်။ ကာတာနိုင်ငံအား သာနီမိသားစုမှ အုပ်ချုပ်ခဲ့သည်မှာ ၁၉ ရာစု အစောပိုင်းမှပင် စခဲ့သည်။ ရှိတ်စော်ဘွား ဂျာဆင်ဘင်မိုဟာမက်အယ်လ်သာနီသည် ကာတာနိုင်ငံကို ထူထောင်ခဲ့သူ ဖြစ်သည်။ ကာတာသည် ဆွေစဉ်မျိုးဆက် ဆက်ခံရသော ဘုရင်စနစ်ကို ကျင့်သုံးပြီး နိုင်ငံ၏ အကြီးအကဲမှာ ရှိတ်စော်ဘွား တာမင် ဘင် ဟာမက်အယ်လ်သာနီ ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံ၏ ဘုရင်စနစ်မှာ စည်းမျဉ်းခံ ဘုရင်စနစ် ကျင့်သုံးသည် ဆိုသော အယူအဆ နှင့်  သက်ဦးဆံပိုင် ဘုရင်စနစ် ကျင့်သုံးသည် ဟူသော အယူအဆ  ကွဲပြားလျက် ရှိကြသည်။ ၂၀၀၃ ခုနှစ်တွင် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေကို လူထုဆန္ဒခံယူပွဲ ဖြင့် အတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပြီး ၉၈% အထိ ထောက်ခံခဲ့ကြသည်။  ၂၀၁၇ ခုနှစ် အစောပိုင်းတွင် ကာတာနိုင်ငံ၏ လူဦးရေမှာ ၂၀၁၇ ခုနှစ် အစောပိုင်းတွင် ၂.၆ သန်းမျှ ရှိပြီး ကာတာနိုင်ငံသား ၃၁၃,၀၀၀ ဦးနှင့် နိုင်ငံခြားသား ကျွမ်းကျင်ပညာရှင် ၂.၃ သန်း ဖြစ်သည်။
အစောပိုင်း နှင့်နှောင်းပိုင်း အစ္စလာမ်ခေတ် (၆၆၁-၁၇၈၃)[ပြင်ဆင်ရန်]
ကာတာနိုင်ငံသည် အူမာယက် ခေတ်အခါက မြင်းနှင့် ကုလားအုပ် မွေးမြူရာတွင် ထင်ရှားသော ဒေသဖြစ်သည်။  ၈ ရာစု သို့ ရောက်သော အခါတွင် ပါရှားပင်လယ်ကွေ့ အတွင်း ၎င်း၏ မဟာဗျူဟာကျသော နေရာကြောင့် အကျိုးဖြစ်ထွန်းခဲ့ပြီး ပုလဲရောင်းဝယ်ရေးတွင် အချက်အချာ ဌာန တစ်ခု ဖြစ်လာခဲ့သည်။ 
ဘာရိန်းနှင့် ဆော်ဒီတို့မှ အုပ်စိုးခြင်း (၁၇၈၃-၁၈၆၈)[ပြင်ဆင်ရန်]
ဗြိတိသျှ အုပ်ချုပ်မှု (၁၉၁၆-၁၉၇၁)[ပြင်ဆင်ရန်]
ဗြိတိသျှ အင်ပိုင်ယာ၏ လွှမ်းမိုးမှုမှာ ဒုတိယကမ္ဘာစစ် အပြီးတွင် စတင် လျော့ကျ လာခဲ့ပြီး အထူးသဖြင့် ၁၉၄၇ ခုနှစ် အိန္ဒိယ နှင့် ပါကစ္စတန်တို့ လွတ်လပ်ရေး ရပြီးနောက်တွင် ဖြစ်သည်။ ၁၉၅၀ ခုနှစ်များတွင် ရေနံသည် ကာတာ၏ အဓိက ဝင်ငွေ အဖြစ် ပုလဲလုပ်ငန်း နှင့် ငါးလုပ်ငန်း အစား စတင် အစားထိုး ဝင်ရောက်လာခဲ့သည်။ ရေနံမှ ရရှိသော ငွေများဖြင့် ကာတာ၏ အခြေခံ အဆောက်အအုံများ တိုးချဲ့ခြင်း နှင့် ခေတ်မီအောင် ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းတို့ကို စတင် ပံ့ပိုးခဲ့သည်။ ၁၉၅၀ ခုနှစ်များတွင် ဗြိတိသျှတို့ ပါရှားပင်လယ်ကွေ့ အတွင်းရှိ အာရပ်စော်ဘွားနယ်များမှ ရုပ်သိမ်းဆုတ်ခွာရန် ဖိအားများ များ များပြား လာခဲ့သည်။ ၁၉၆၈ ခုနှစ်တွင် ဗြိတိသျှတို့မှ နောက် ၃ နှစ်အကြာတွင် ပါရှားပင်လယ်ကွေ့၏ နိုင်ငံရေးတွင် ပါဝင်ပတ်သက်တော့မည် မဟုတ်ဟု ကြေညာသော အခါတွင် ကာတာသည် ဘာရိန်း နှင့် အခြားသော ထရူရှယ် နိုင်ငံ ၇ နိုင်ငံ ဖက်ဒရယ် အစိုးရသို့ ပူးပေါင်းဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ ဒေသတွင်း အငြင်းပွားမှုများကြောင့် ကာတာအနေနှင့် နောင်တွင် အာရပ်စော်ဘွားများ ပြည်ထောင်စု ဖြစ်လာမည့် ထိုညွှန့်ပေါင်းအဖွဲ့မှ နုတ်ထွက်ကာ လွတ်လပ်ရေး ကြေညာခဲ့သည်။
လွတ်လပ်ရေး နှင့် နောက်ပိုင်းခေတ် (၁၉၇၁ မှ ယခု)[ပြင်ဆင်ရန်]
၁၉၉၅ ခုနှစ်တွင် အီမာစော်ဘွား ဟာမက် ဘင် ခါလီဖာ အယ်လ်သာနီသည် ၎င်း၏ ဖခင် ဖြစ်သူ ခါလီဖာ ဘင် ဟာမက် အယ်လ်သာနီ ထံမှ စစ်တပ်နှင့် အစိုးရ အဖွဲ့သာမက အိမ်နီးချင်း နိုင်ငံများ အပြင် ပြင်သစ်တို့၏ ထောက်ခံမှုဖြင့် နိုင်ငံအုပ်ချုပ်မှုအား လွှဲပြောင်းသိမ်းပိုက်ခဲ့သည်။ အီမာစော်ဘွား ဟာမက်၏ လက်ထက်တွင် ကာတာသည် အတန်အသင့် ပွင့်လင်းလာခဲ့ပြီး ၁၉၉၆ ခုနှစ်တွင် အယ်လ်ဂျာဇီးယား ရုပ်မြင်သံကြားဌာနကို တည်ထောင်ခြင်း၊ ၁၉၉၉ ခု မြူနီစီပါယ် ရွေးကောက်ပွဲများတွင် အမျိုးသမီးများ မဲပေးခွင့် ရလာခြင်း၊ ၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင် ပထမဆုံး အခြေခံဥပဒေ ရေးဆွဲခြင်း နှင့် ၂၀၀၈ ခုနှစ် ရိုမန်ကက်သလစ် ဘုရားကျောင်း တည်ထောင်ခြင်း တို့ ဖြစ်ကြသည်။ ၂၀၁၀ တွင် ကာတာသည် ၂၀၂၂ ခုနှစ် ဖီဖာ ကမ္ဘာ့ဖလား ဘောလုံးပွဲကို အိမ်ရှင် အဖြစ် လက်ခံကျင်းပရန် အခွင့်အရေးကို အောင်မြင်စွာရရှိခဲ့ပြီး အရှေ့အလယ်ပိုင်း နိုင်ငံများတွင် ကမ္ဘာ့ဖလားကို ပထမဆုံး အိမ်ရှင် အဖြစ် ကျင်းပမည့် နိုင်ငံ ဖြစ်သည်။ အီမာမှ ကာတာ၏ ပထမဆုံး ဥပဒေပြု ရွေးကောက်ပွဲကို ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် ကျင်းပရန် ကြေညာခဲ့သည်။ ၂၀၁၃ ခုနှစ် ဒုတိယနှစ် တစ်ဝက် အတွင်း ကျင်းပရန် စီစဉ်ထားသော်လည်း ၂၀၁၃ ဇွန်လတွင် ရွှေ့ဆိုင်းခဲ့ကာ နောက်ထပ် ကာတာ၏ အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ၂၀၁၉ အထိ ရွှေ့ဆိုင်းသွားနိုင်သည်။
၂၀၀၃ ခုနှစ်တွင် ကာတာသည် အမေရိကန်တို့ အီရတ်နိုင်ငံအား ကျူးကျော်ဝင်ရောက်ရာတွင် အမေရိကန် စစ်ဆင်ရေး ဗဟိုဌာနချုပ် နေရာ အဖြစ်လည်းကောင်း အဓိက စစ်ထွက်ရာ ဒေသတစ်ခု အဖြစ်လည်းကောင်း ပါဝင်ခဲ့သည်။၂၀၀၅ ခုနှစ် မတ်လတွင် ဒိုဟာ ပလေယာ ဇာတ်ရုံတွင် အသေခံဗုံးခွဲမှုကြောင့် ဗြိတိသျှ ဆရာမတစ်ဦးအား သေဆုံးစေခဲ့သဖြင့် ယခင်က အကြမ်းဖက်မှုကို မကြုံတွေ့ဖူးသော တစ်နိုင်ငံလုံး တုန်လှုပ်သွားခဲ့သည်။ ထိုဗုံးခွဲမှုကို ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်မှာ ကာတာရှိ အီဂျစ်လူမျိုး အိုမာ အာမက် အဗ္ဗဒူလာ အလီ ဖြစ်ပြီး အာရပ်ကျွန်းဆွယ်ရှိ အယ်လ်ကိုင်းဒါး အကြမ်းဖက် အဖွဲ့နှင့် ဆက်နွယ်နေသည်ဟု သံသယရှိခြင်း ခံရသူ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် ကာတာသည် နေတိုး၏ လစ်ဗျား စစ်ဆင်ရေးတွင် ပါဝင်ပူးပေါင်းခဲ့ပြီး လစ်ဗျား အတိုက်အခံများကို လက်နက်တပ်ဆင်ပေးခဲ့သည်ဟု သတင်းရသည်။ထို့အပြင် ယခုလက်ရှိ ဆီးရီးယား ပြည်တွင်းစစ်အတွင်း သူပုန်အဖွဲ့များအား အဓိက လက်နက်ထောက်ပံ့ပေးနေသူလည်း ဖြစ်သည်။ကာတာနိုင်ငံသည် အာဖဂန်နစ္စတန် နိုင်ငံ ငြိမ်းချမ်းရေး အတွက်လည်း ကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပြီး ၂၀၁၂ ဇန်နဝါရီလတွင် တာလီဘန်တို့က ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးမှုများ အဆင်ပြေစေရန် အတွက် ကာတာတွင် နိုင်ငံရေး ရုံးတစ်ခုအား ဖွင့်လှစ်မည်ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
၂၀၁၁ ခုနှစ် အထိ ဒိုဟာမြို့ အနီး လူတို့ ပြုလုပ်ထားသော ကျွန်းတစ်ခု ဖြစ်သည့် ပါးလ်ကာတာတွင် အရက် ရောင်းချခွင့် ပြုထားသည်။ထိုနှစ် ဒီဇင်ဘာတွင် စားသောက်ဆိုင်များအား အရက်ရောင်းချချင်း မပြုရန် တားမြစ်ခဲ့သည်။ ထိုသို့ တားမြစ်မှုအတွက် အကြောင်းပြချက် မပေးခဲ့ပေ။ သို့သော်လည်း အများက ထင်မြင်ယူဆကြသည်မှာ အစိုးရ အနေနှင့် နိုင်ငံ၏ ပထမဆုံးသော တော်ဝင်အကြံပေးအဖွဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ မတိုင်မီတွင် ပိုမို၍ ဘာသာရေး ကိုင်းရှိုင်းသည့် ပုံရိပ်ကို လိုချင်သောကြောင့် ဖြစ်သည် ဟူ၍ ယူဆကြသည်။ အစိုးရနှင့် အပန်းဖြေ စခန်း တည်ဆောက်သူတို့ကြား ငွေရေးကြေးရေး အငြင်းပွားမှု ဖြစ်ပွားနေသည်ဟုလည်း ကောဠာဟာလ ထွက်ပေါ်လျက် ရှိသည်။
၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် ကာတာ အာဏာပိုင်တို့မှ သီးခြားဖြစ်သော အလုပ်သမားသမဂ္ဂ တည်ထောင်ခွင့်ပေးမည့် ၎င်းတို့၏ ဆန္ဒကို ကြေညာခဲ့သည်။ ထို့ပြင် နိုင်ငံခြားသား အလုပ်သမားများ အားလုံးအတွက် ပြည်တွင်း အလုပ်ရှင်မှ စပွန်ဆာ ပေးရန် လိုအပ်သော စပွန်ဆာ စနစ်ကို ဖျက်သိမ်းမည်ဟူ၍လည်း ကြေညာခဲ့သည်။ အလုပ်သမား ဥပဒေကို ပြင်ဆင်မှုများထဲတွင် အလုပ်သမားများ၏ လခအားလုံးကို သူတို့၏ ဘဏ်စာရင်းထဲသို့ တိုက်ရိုက်ထည့်သွင်းရန် အာမခံခြင်း နှင့် နွေရာသီအတွင်း အပူဆုံး အချိန်များတွင် ပြင်ပတွင် အလုပ်လုပ်ချိန် ကို ကန့်သတ်ခြင်းတို့ ပါဝင်သည်။၂၀၁၅ အစောပိုင်းတွင် ရေးဆွဲသော ဥပဒေကြမ်းမှ အလုပ်သမားများ၏ လစာကို ပေးရန် ပျက်ကွက်သော ကုမ္ပဏီများ အနေနှင့် အလုပ်သမား ထပ်မံ ငှားရမ်းခွင့်ကို ခဏတာ ဆိုင်းငံ့ထားမည် ဆိုသော အချက်လည်း ပါဝင်သည်။
ကာတာနိုင်ငံသည် ပညာရေး၊ ဘာသာရေး၊ နိုင်ငံရေး နှင့် စီးပွားရေး ဆိုင်ရာ ညီလာခံများစွာကို အိမ်ရှင် အဖြစ် လက်ခံကျင်းပခဲ့သည်။ ၁၁ ကြိမ်မြောက် ဒိုဟာ ဖိုရမ်တွင် အဓိက အတွေးအခေါ် ပညာရှင်များ၊ နောက်ခံ အမျိုးမျိုးမှ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်များနှင့် ကမ္ဘာတဝှမ်းမှ နိုင်ငံရေး ခေါင်းဆောင်များကို ဖိတ်ကြား၍ ဒီမိုကရေစီ၊ မီဒီယာ၊ သတင်းအချက်အလက် နည်းပညာ၊ လွတ်လပ်စွာ ကုန်သွယ်မှု နှင့် အနာဂတ် ရေလုံလောက်စွာ ရရှိရေး ဆိုင်ရာ ပြဿနာများကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ ထို့ပြင် ၂၀၀၆ ခုနှစ်မှစ၍ ထိုဖိုရမ်တွင် အနာဂတ် စီးပွားရေး ညီလာခံကို အဓိကထား၍ ကျင်းပခဲ့သည်။ လတ်တလော ကာလများတွင် ကာတာမှ ကမ္ဘာတဝှမ်းရှိ ပြိုင်ဘက်များ အကြား ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးပွဲများကို လက်ခံ ကျင်းပ ပေးခဲ့သည်။ ၎င်းတို့ထဲတွင် သိသာထင်ရှားသည့် ဆွေးနွေးမှုမှာ ဒါဖာ သဘောတူညီချက် ဖြစ်သည်။ ဒိုဟာ ကြေညာချက်သည် ဒါဖာ ရှိ ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ် အတွက် အခြေခံ ဖြစ်ပြီး အာဖရိက ဒေသ တွင် သိသာလောက်သော အကျိုးရလဒ်များကို ရရှိခဲ့သည်။ သိသာထင်ရှားသည့် အောင်မြင်မှုများတွင် လုံခြုံရေးနှင့် တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှု ပြန်လည် ဖော်ဆောင်နိုင်ခြင်း၊ တည်ဆောက်ရေးနှင့် ပြန်လည် တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ တိုးတက်လာခြင်း၊ မိမိတို့ နေရပ်မှ စွန့်ခွာသွားသူများ ပြန်လာခြင်း နှင့် ဒါဖာရှိ ပြည်သူများအား စည်းရုံးစေပြီး ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ် အတွက် ရှေ့သို့ ဆက်လှမ်းရန် တွန်းအားပေးနိုင်ခြင်းတို့ ဖြစ်ကြသည်။ ကာတာသည် ဘဏ္ဍာရေး ပြန်လည် လှုပ်ရှားရေး နှင့် ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေး တို့ အတွက် ဒါဖာသို့ စတာလင်ပေါင် ၈၈.၅ သန်း လှူဒါန်းခဲ့သည်။
စတော့ခ်ဟုမ်း အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ငြိမ်းချမ်းရေး သုတေသန အင်စတီကျု (SIPRI) ၏ လေ့လာတွေ့ရှိချက်အရ ကာတာသည် ၂၀၁၀ မှ ၂၀၁၄ အတွင်း ကမ္ဘာပေါ်တွင် လက်နက် တင်သွင်းမှု၌ အဆင့် ၄၆ ရှိသည်။ ကာတာ တွင်ရှိသော သူ၏ စစ်တပ်များကို ပုံစံပြောင်းလဲရန် နှင့် သိသာစွာ တိုးချဲ့ရန် အစီအစဉ်မှာ အရှိန်မြင့်တက်လျက် ရှိသည်။ ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် ဂျာမနီမှ တင့်ကား ၆၂ စင်း နှင့် အမြောက် ၂၄ လက်ကို မှာယူပြီးနောက်တွင် ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် အခြား ကန်ထရိုက်စာချုပ်များကို ဆက်လက်ချုပ်ဆိုခဲ့ကာ ၎င်းတို့တွင် တိုက်ခိုက်ရေး ရဟတ်ယာဉ် ၂၄ စင်း၊ လေကြောင်းရန် ကာကွယ်ရေး လေယာဉ် ၃ စင်း တို့ကို အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုမှ မှာယူခဲ့သည်။ ထို့ပြင် စပိန်နိုင်ငံမှလည်း ဆီသည် လေယာဉ် ၂ စင်းကို ဝယ်ယူခဲ့သည်။ 
ကာတာကျွန်းဆွယ်သည် ၁၀၀ မိုင် (၁၆၀ ကီလိုမီတာ) မျှ ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံ၏ မြောက်ဘက် ပါရှန်းပင်လယ်ကွေ့ အတွင်းသို့ ထိုးထွက်လျက် ရှိသည်။ မြောက်လတ္တီကျု ၂၄° မှ ၂၇° ကြား၊ အရှေ့လောင်ဂျီကျု ၅၀° မှ ၅၂° ကြားတွင် တည်ရှိသည်။ နိုင်ငံ၏ နေရာ အတော်များများသည် နိမ့်သော ကျောက်မြေများရှိပြီး သဲများဖြင့် ဖုံးလွှမ်းလျက် ရှိသည်။ အရှေ့တောင်ဘက်တွင် ခိုးလ်အယ်လ် အဒိတ် ကုန်းတွင်း ပင်လယ်ရှိပြီး ပါရှားပင်လယ်ကွေ့ အတွင်း ဝင်ရောက်သော မြစ်လက်တက် တစ်ခုအား စီတန်းနေသာ သဲတောင်ကုန်းများဖြင့် ဝိုင်းရံထားခြင်း ဖြစ်သည်။ ပြင်းပြသော ဆောင်းရာသီနှင့် အလွန်ပူပြင်းပြီး စိုစွတ်သော နွေရာသီများ ရှိသည်။
ဇီဝမျိုးကွဲများ နှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်[ပြင်ဆင်ရန်]
၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင် တည်ထောင်သော ကာတာ ရင်းနီးမြှုပ်နှံမှု အာဏာပိုင် အဖွဲ့သည် နိုင်ငံ၏ နိုင်ငံတော်ဆိုင်ရာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အဖွဲ့ ဖြစ်ပြီး နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအား အထူးပြုလုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ရေနံနှင့် သဘာဝ ဓာတ်ငွေ့ လုပ်ငန်းမှ ဘီလီယံ နှင့် ချီသော ဒေါ်လာ အပိုငွေများကြောင့် ကာတာ အစိုးရသည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ ဥရောပ နှင့် အာရှ ပစိဖိတ် ဒေသတို့တွင် တိုက်ရိုက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ ပြုခဲ့သည်။ ၂၀၁၃ ခုနှစ် လေ့လာတွေ့ရှိချက်အရ ထိုဦးပိုင် ကုမ္ပဏီ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုမှာ ဒေါ်လာ ၁၀၀ ဘီလီယံ မျှ ရှိသည်။ ကာတာ ဦးပိုင်ကုမ္ပဏီသည် ကာတာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အာဏာပိုင် အဖွဲ့၏ နိုင်ငံတကာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အဖွဲ့ခွဲ ဖြစ်သည်။ ကာတာ ဦးပိုင် ကုမ္ပဏီသည် နိုင်ငံတော်မှ တစ်နှစ်လျှင် ဒေါ်လာ ဘီလီယံ ၃၀ မှ ၄၀ အထိ ရရှိသည်။ ၎င်းသည် ကမ္ဘာတဝှမ်းလုံးတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အမြောက်အမြား ရှိပြီး ဗယ်လင်တီနို၊ ဆီးမန်း၊ ပရင်တမ့်၊ ဟားရော့ဒ်၊ သည်ရှတ်ဒ်၊ ဘာကလေဘဏ်၊ ဟိသရိုးလေဆိပ်၊ ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း ဘောလုံး အသင်း၊ ဗော့စ်ဝက်ဂွန် ဂရု၊ ရွိုင်ရယ်လ်ဒတ်ချ်ရှဲလ်၊ အမေရိကန်ဘဏ်၊ တစ်ဖနီ ၊ တရုတ်လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးဘဏ်၊ စိန်းဘူရီ၊ ဘလက်ဘယ်ရီ  နှင့် ဆန်းတန်ဒါ ဘရာစေး တို့တွင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားသည်။ 
ကာတာနိုင်ငံတွင် အခွန်ကောက်ခံခြင်း မရှိပေ။ သို့သော်လည်း အာဏာပိုင်များက ကျန်းမာရေး နှင့် မညီညွတ်သော အစားအစာများနှင့် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများကို အခွန်ကောက်ခံရန် အစီအစဉ်ကို ကြေညာထားသည်။ အခွန်အခများကို လူ့ခန္ဓာကိုယ်အား ထိခိုက်စေသာ ပစ္စည်းများ ဖြစ်သည့် အမြန်ချက် အစားအစာများ၊ ဆေးရွက်ကြီးနှင့် ဆက်စပ်သော ပစ္စည်းများ နှင့် အချိုရည်များတွင် ကောက်ခံမည် ဖြစ်သည်။ ထို့သို့ စတင် အခွန်ကောက်ခံရခြင်းမှာ ရေနံဈေး ကျဆင်းခြင်းကြောင့် ၂၀၁၆ ခုနှစ် နိုင်ငံတော် ဘတ်ဂျက်တွင် လိုငွေ ပြမှုကြောင့် ဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် ၂၀၁၆ မှစ၍ ရေနံ ကုမ္ပဏီများ နှင့် အခြား အစိုးရ ဌာနများတွင် အလုပ်သမား လျှော့ချခြင်းကို တွေ့မြင်ရသည်။ 
အွမ်ဆက်တွင် အခြေစိုက်သော ကာတာ၏ အကြီးစား စက်မှု လုပ်ငန်း စီမံကိန်းများတွင် တစ်နေ့လျှင် ရေနံစိမ်း စည် ၅၀,၀၀၀ မျှ ကို သန့်စင်နိုင်သော ရေနံချက် စက်ရုံ၊ ယူရီးယား နှင့် အမိုးနီးယား ဓာတ်မြေဩဇာ စက်ရုံ၊ စတီး စက်ရုံ နှင့် ရေနံဓာတု စက်ရုံ တို့ပါဝင်သည်။ ထို စက်မှု လုပ်ငန်းများ အားလုံးတွင် လောင်စာဆီ အတွက် သဘာဝ ဓာတ်ငွေ့ကို အသုံးပြုကြသည်။ အများစုသော စက်ရုံများမှာ နိုင်ငံပိုင် ကာတာ အထွေထွေ ရေနံ ကော်ပိုရေးရှင်း (ကျူဂျီပီစီ) နှင့် ဥရောပ သို့မဟုတ် ဂျပန် ကုမ္ပဏီများ ဖက်စပ် လုပ်ကိုင်ကြခြင်း ဖြစ်သည်။ အမေရိကန်သည် ကာတာ ရေနံနှင့် သဘာဝ ဓာတ်ငွေ့ လုပ်ငန်းသို့ အဓိက စက်ပစ္စည်း ရောင်းချသူ ဖြစ်ပြီး အမေရိကန် ကုမ္ပဏီများသည် မြောက်ပိုင်း သဘာဝဓာတ်ငွေ့တွင်းတွင် အဓိက နေရာမှ ပါဝင်ပတ်သက်လျက် ရှိသည်။
ဖရီးဒမ်းဟောက်စ် ၏ ၂၀၁၄ ခုနှစ် သတင်းစာလွတ်လပ်မှု အစီရင်ခံစာ အရ ကာတာ မီဒီယာအား "လွတ်လပ်မှုမရှိ" ဟု အဆင့်သတ်မှတ်သည်။  ကာတာနိုင်ငံတွင် ရုပ်မြင်သံကြား ထုတ်လွှင့်ခြင်းကို ၁၉၇၀ တွင် စတင်ခဲ့သည်။  အဲလ် ဂျာဇီးယား သည် အဓိက ရုပ်မြင်သံကြား ကွန်ယက်တစ်ခု ဖြစ်ပြီး ကာတာနိုင်ငံ ဒိုဟာမြို့တွင် ရုံးချုပ် တည်ရှိသည်။ အယ်ဂျာဇီးယားသည် ၁၉၉၆ ခုနှစ်တွင် အာရပ် သတင်း နှင့် လက်ရှိ အဖြစ်အပျက်များ ဆိုင်ရာ ဂြိုဟ်တု ရုပ်မြင်သံကြား ချန်နယ် တစ်ခု အဖြစ် အစပြုခဲ့ပြီး ယခုအခါတွင် ကမ္ဘာတဝှမ်းလုံးတွင် အယ်ဂျာဇီးယား မီဒီယာ ကွန်ယက် ဟု အမည်ရသော အထူးပြု ရုပ်မြင်သံကြား ချန်နယ်များကို ထုတ်လွှင့်လျက် ရှိသည်။
ပုံနှိပ် မီဒီယာ ကဏ္ဍသည် လတ်တလော နှစ်များ အတွင်း တိုးချဲ့လာခဲ့သည်။ ယခုလက်ရှိ ကာတာတွင် ထုတ်ဝေနေသော သတင်းစာ ၇ စောင် ရှိပြီး ၄ စောင်မှာ အာရပ်ဘာသာဖြင့် ထုတ်ဝေကာ ၃ စောင်မှာ အင်္ဂလိပ် ဘာသာဖြင့် ထုတ်ဝေလျက် ရှိသည်။  ထို့ပြင် အိန္ဒိယ၊ နီပေါ နှင့် သီရိလင်္ကာမှ သတင်းစာများကိုလည်း ကာတာအတွက် ပုံနှိပ်မှု အဖြစ် ထုတ်ဝေခြင်းများလည်း ရှိသည်။
၂၀၁၀ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၂ ရက်တွင် ကာတာ အနေနှင့် ကမ္ဘာ့ဖလား ဗိုလ်လုပွဲသို့ တစ်ကြိမ်မျှ တက်ရောက်ခဲ့ဖူးခြင်း မရှိသော်လည်း ၂၀၂၂ ခုနှစ် ကမ္ဘာ့ဖလားအား အိမ်ရှင်အဖြစ် လက်ခံကျင်းပရန် အတွက် ၎င်းတို့၏ အဆိုပြုချက် အောင်မြင်ခဲ့သည်။  ကာတာရှိ ပွဲစီစဉ်သူများသည် ထိုပြိုင်ပွဲအတွက် အားကစားရုံ အသစ် ၉ ခု တည်ဆောက်ရန် နှင့် လက်ရှိ အားကစားရုံ ၃ ခုအား ချဲ့ထွင်ရန် စီစဉ်လျက် ရှိသည်။ ၂၀၂၂ ခုနှစ် ကမ္ဘာ့ဖလားအား အိမ်ရှင် အဖြစ် လက်ခံကျင်းပခွင့် ရရှိခြင်း အတွက် ပါရှား ပင်လယ်ကွေ့ ဒေသမှ စိတ်အား တက်ကြွစွာ ကြိုဆိုကြပြီး အရှေ့အလယ်ပိုင်း နိုင်ငံများထဲတွင် ထိုသို့ အိမ်ရှင် အဖြစ် ကျင်းပခွင့်ရခြင်းသည် ပထမဦးဆုံး အကြိမ် ဖြစ်သောကြောင့်ပင် ဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း ထိုသို့ ကျင်းပခွင့် ရခြင်း အတွက် အငြင်းပွားမှုများစွာ ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး လာဘ်ပေးသည်ဟု စွပ်စွဲခံရပြီး လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှုကို စုံစမ်းရာတွင်လည်း ဝင်ရောက်စွက်ဖက်သည်ဟု စွပ်စွဲခံရသည်။ ဥရောပ ဘောလုံး အဖွဲ့ချုပ်များမှလည်း ၂၀၂၂ ခုနှစ် ကမ္ဘာ့ဖလားကို ကာတာတွင်ကျင်းပရခြင်း အတွက် အကြောင်းအမျိုးမျိုးတို့ကြောင့် ကန့်ကွက်ခဲ့ပြီး ထိုအကြောင်းများထဲတွင် ပူနွေးသော အပူချိန်ကြောင့် ကစားသမားများ၏ ကြံ့ခိုင်မှုကို ထိခိုက်နိုင်သည် ဆိုသော အချက်နှင့် အကယ်၍ ဆောင်းရာသီတွင် ကျင်းပမည် ဆိုပါက ဥရောပ ဘောလုံးကလပ်ပြိုင်ပွဲများတွင် အနှောင့်အယှက် ဖြစ်နိုင်သည် ဆိုသော အချက်တို့ ပါဝင်သည်။  ၂၀၁၄ ခုနှစ် မေလတွင် ကာတာ ဘောလုံးအဖွဲ့မှ တာဝန်ရှိသူ မိုဟာမက် ဘင် ဟန်မန်အား ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်မှ တာဝန်ရှိသူများကို ပေါင် ၃သန်း လာဘ်ပေးခြင်းဖြင့် ၎င်းတို့၏ အဆိုပြုချက်ကို ထောက်ခံစေသည်ဟု စွပ်စွဲခံရသည်။သို့သော်လည်း ၂၀၁၄ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာတွင် ဖီဖာမှ အိမ်ရှင်အဖြစ် လက်ခံကျင်းပရန် လုပ်ငန်းစဉ်ကို စစ်ဆေးရာတွင် ကာတာသည် မှားယွင်းမှု တစ်စုံတစ်ရာ မလုပ်ခဲ့ကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။ 
ဗြိတိသျှ နေ့စဉ်ထုတ် သတင်းစာ တစ်စောင်ဖြစ်သော ဂါးဒီးယန်း သတင်းစာမှာ "၂၀၂၂ ခုနှစ် အဲမရိတ်အတွင် ပြင်ဆင်ရာတွင် ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများအား ခေါင်းပုံဖြတ်ခြင်း နှင့် ဖိနှိပ်ခြင်း" အမည်ရသည့် သတင်းဇာတ်လမ်းတို တစ်စောင်ကို ထုတ်ဝေခဲ့သည်။  ဂါးဒီးယန်း၏ ၂၀၁၄ ခုနှစ် စုံစမ်းထောက်လှမ်းမှု အရ ၂၀၂၂ ခုနှစ် ကမ္ဘာ့ဖလား ဘောလုံးပွဲ စီစဉ်သူများ အတွက် ခမ်းနားကြီးကျယ်သော ရုံးခန်းများကို တည်ဆောက်ပေးနေရသည့် ရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမားများသည် တစ်နှစ်ကျော်မျှ လစာ မရရှိဘဲ ယခု အခါတွင် ပိုးဟပ်များ ပြည့်နှက်နေသည့် အဆောင်များတွင် နေထိုင်၍ တရားမဝင် အလုပ်လုပ်နေရသည်ကို အစီရင်ခံ ဖော်ပြထားသည်။  ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် ၂၀၂၂ ခုနှစ် ကမ္ဘာ့ဖလား အတွက် အခြေခံ အဆောက်အအုံများ ဆောက်လုပ်ရာတွင်ပါဝင်နေသည့် နီပေါ ရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမားများမှာ ၂ ရက်လျှင် တစ်ယောက်နှုန်း သေဆုံးခဲ့သည်။ ကာတာ ၂၀၂၂ ခုနှစ် လုပ်ငန်းဖော်ဆောင်ရေး ကော်မတီမှ အမျိုးမျိုးသော စွပ်စွဲမှုများ အတွက် တုံ့ပြန်သည်မှာ ကာတာတွင် ကမ္ဘာ့ဖလားကို ကျင်းပ ခြင်းသည် ဒေသအတွင်း အပြောင်းအလဲများကို လျင်မြန်စွာ ဖော်ဆောင်နိုင်ရန် အထောက်အပံ့ တစ်ခုဖြစ်သည် ဟူ၍ပင် ဖြစ်သည်။ 
ကာတာသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် လူတစ်ဦးချင်း ဝင်ငွေ အမြင့်ဆုံး ရှိသော်လည်း ၂၀၁၂ ပီအိုင်အက်စ်အေ စာမေးပွဲ ၁၅ နှစ် နှင့် ၁၆ နှစ်သားတို့အတွက် အဖတ်စွမ်းရည် ပြိုင်ပွဲတွင် အိုအီးစီဒီ နိုင်ငံ ၆၅ နိုင်ငံ၌ အောက်ဆုံးမှစ၍ ရေတွက်လျှင် တတိယ နေရာသို့ ရောက်ခဲ့သဖြင့် ကိုလံဘီယာ နိုင်ငံ သို့ အယ်လ်ဘေးနီးယား နိုင်ငံ နှင့် အဆင့်တူပင် ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံတော် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး မဟာဗျူဟာ အရ ကာတာသည် ၁၀ နှစ် မဟာဗျူဟာ စီမံကိန်းကို ရေးဆွဲပြီး ပညာရေး အဆင့်ကို မြှင့်တင်ရန် ကြိုးပမ်းလျက် ရှိသည်။ထို့ပြင် အစိုးရမှ အယ်လ် ဘိုင်ရပ် ကဲ့သို့သော ပညာရေး ဖြန့်ကျက်မှု အစီအစဉ်များကို စတင်ခဲ့သည်။ အယ်လ်ဘိုင်ရပ်အား ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင် စတင်ခဲ့ပြီး အထက်တန်းကျောင်းသားများအား ကာတာ တက္ကသိုလ်၏ အဆင့်မြင့်ကုန်ကြမ်းဌာနတွင် သုတေသန ပတ်ဝန်းကျင် အတွေ့အကြုံ ရရှိစေရန် အတွက် ရည်ရွယ်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ထိုအစီအစဉ်တွင် STEM နယ်ပယ် (သိပ္ပံ၊ နည်းပညာ၊ အင်ဂျင်နီယာ နှင့် သင်္ချာ) နှင့် ဘာသာစကား နယ်ပယ်များ ပါဝင်သည်။
↑ The Constitution။ Government Communications Office။
↑ Population structure။ Ministry of Development Planning and Statistics (31 January 2020)။
↑ ၃.၀ ၃.၁ ၃.၂ Populations။ Qsa.gov.qa။9July 2010 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 18 June 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ ကိုးကား အမှား - Invalid <ref> tag; name "census10" defined multiple times with different content
↑ ၄.၀ ၄.၁ ၄.၂ ၄.၃ World Economic Outlook Database, April 2018 – Report for Selected Countries and Subjects။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ငွေကြေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့ (IMF) (April 2018)။
↑ List of left- & right-driving countries – World Standards။
↑ ၈.၀ ၈.၁ BBC News, How democratic is the Middle East?,9September 2005.
↑ ၉.၀ ၉.၁ United States Department of State Country Reports on Human Rights Practices for 2011: Qatar, 2011.
↑ ၁၁.၀ ၁၁.၁ Gardener၊ David။ "Qatar shows how to manageamodern monarchy"၊ Financial Times။
↑ "The World Factbook"၊ CIA Factbook။ 11 June 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on7February 2012။
↑ ၁၃.၀ ၁၃.၁ "Canada – Qatar Bilateral Relations"၊ Government of Canada။
↑ ၁၄.၀ ၁၄.၁ IFES Election Guide - Elections: Qatar Referendum Apr 29 2003။5June 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၁၅.၀ ၁၅.၁ Qatar 2003။ 10 October 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။5June 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၁၆.၀ ၁၆.၁ ၁၆.၂ ၁၆.၃ Population of Qatar by nationality - 2017 report။7February 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၂၆.၀ ၂၆.၁ History of Qatar။ Qatar Statistics Authority။6June 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 11 May 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၂၈.၀ ၂၈.၁ About us။ Katara။ 22 July 2015 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 11 May 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၃၀.၀ ၃၀.၁ ၃၀.၂ Toth, Anthony. "Qatar: Historical Background." A Country Study: Qatar (Helen Chapin Metz, editor). Library of Congress Federal Research Division (January 1993). This article incorporates text from this source, which is in the public domain.
↑ ၃၁.၀ ၃၁.၁ Khalifa၊ Haya; Rice၊ Michael (1986)။ Bahrain Through the Ages: The Archaeology။ Routledge။ pp. 79, 215။ ISBN 978-0710301123။
↑ ၃၂.၀ ၃၂.၁ History of Qatar။ Ministry of Foreign Affairs. Qatar. London: Stacey International, 2000။9January 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၄၄.၀ ၄၄.၁ ၄၄.၂ Fromherz၊ Allen (13 April 2012)။ Qatar: A Modern History။ Georgetown University Press။ pp. 44, 60, 98။ ISBN 978-1-58901-910-2။
↑ ၄၅.၀ ၄၅.၁ Rahman၊ Habibur (2006)။ The Emergence Of Qatar။ Routledge။ p. 34။ ISBN 978-0710312136။
↑ ၅၃.၀ ၅၃.၁ Althani၊ Mohamed (2013)။ Jassim the Leader: Founder of Qatar။ Profile Books။ p. 16။ ISBN 978-1781250709။
↑ ၅၇.၀ ၅၇.၁ Heard-Bey၊ Frauke (2008)။ From Tribe to State. The Transformation of Political Structure in Five States of the GCC။ p. 39။ ISBN 978-88-8311-602-5။
↑ ၆၃.၀ ၆၃.၁ ၆၃.၂ Kursun၊ Zekeriya (2004)။ Katar'da Osmanlilar 1871–1916။ Turk Tarih Kurumu။
↑ ၆၉.၀ ၆၉.၁ ၆၉.၂ Amiri Diwan – Shaikh Abdullah Bin Jassim Al Thani။ Diwan.gov.qa။ 10 February 2012 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 28 October 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၇၂.၀ ၇၂.၁ ၇၂.၂ nouvelobs.com: "Qatar : "S'ils pouvaient, ils achèteraient la Tour Eiffel",7April 2013
↑ "The World factbook"၊ CIA.Gov၊ 20 June 2014။ 20 June 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 24 December 2018။
↑ ၈၄.၀ ၈၄.၁ ၈၄.၂ ၈၄.၃ ၈၄.၄ Qatar။ CIA World Factbook။ Central Intelligence Agency (8 February 2012)။ 24 December 2018 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။4March 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၈၅.၀ ၈၅.၁ ၈၅.၂ Lambert, Jennifer (2011). "Political Reform in Qatar: Participation, Legitimacy and Security" 19 (1). Middle East Policy Council.
↑ ၉၀.၀ ၉၀.၁ ၉၀.၂ The Permanent Constitution of the State of Qatar။ Government of Qatar။
↑ ၉၁.၀ ၉၁.၁ ၉၁.၂ Constitution of Qatar။ “According to Article 1: Qatar is an independent Arab country. Islam is its religion and Sharia law is the main source of its legislation.”
↑ ၉၅.၀ ၉၅.၁ Amnesty International Annual Report 2012 – Qatar။ Amnesty International။ 19 March 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၉၆.၀ ၉၆.၁ Filipino woman gets 100 lashes for giving birth in Qatar။
↑ Qatar။ Amnesty International။ 20 October 2014 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 13 June 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Qatar။ Amnesty International။3January 2015 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 13 June 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Qatar sentences man to lashes for drinking alcohol။ Al Akhbar။6October 2014 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 13 June 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၁၀၅.၀ ၁၀၅.၁ Jenifer Fenton။ "Religious law, prison for "blasphemy", severe sexual inequalilty: Qatar's human rights review"။ 13 June 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 18 March 2015။
↑ ၁၀၇.၀ ၁၀၇.၁ ၁၀၇.၂ ၁၀၇.၃ Alex Delmar-Morgan။ "Qatar, Unveiling Tensions, Suspends Sale of Alcohol"၊ Wall Street Journal၊7January 2012။ 17 January 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၁၀၈.၀ ၁၀၈.၁ ၁၀၈.၂ Jenifer Fenton။ "Qatar's Impromptu Alcohol Ban"၊ The Arabist၊ 16 January 2012။ 17 January 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၁၁၂.၀ ၁၁၂.၁ James M. Dorsey။ "Debate Questions Emir's Powers To Shape Qatar's Positioning As Sports Hub And Sponsor of Revolts – Analysis"၊ The Eurasia Review၊ 17 January 2012။ 17 January 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၁၁၅.၀ ၁၁၅.၁ ၁၁၅.၂ ၁၁၅.၃ "Country Narratives"။ Human Trafficking Report 2011။ Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons, United States Department of State။ June 2011။ 21 January 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၁၂၂.၀ ၁၂၂.၁ Qatar to allow trade union, scrap 'sponsor' system။ Al Arabiya (1 May 2012)။ 12 March 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၁၃၀.၀ ၁၃၀.၁ "Qatar IsaU.S. Ally. They Also Knowingly Abet Terrorism. What's Going On?" (6 October 2014). New Republic. Retrieved on7October 2014. “Two overarching goals have driven Qatari policy. One has been to maximize Qatar's influence on the regional and international stage. This originally reflected the personal ambition of the former ruler and current emir's father, Shaykh Hamad bin Khalifa al Thani, and his foreign minister and eventual prime minister, Shaykh Hamad bin Jassim al Thani. The two men directed foreign policy until the father abdicated in favor of his son, Emir Tamim bin Hamad al Thani, in July 2013. The second objective has been to preserve the security of the ruling family and state.”
↑ ၁၃၅.၀ ၁၃၅.၁ ၁၃၅.၂ ၁၃၅.၃ "Taking Outsize Role in Syria, Qatar Funnels Arms to Rebels"၊ New York Times၊ 30 June 2013။ 21 January 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၁၄၀.၀ ၁၄၀.၁ Saudi Arabia uses terrorism as an excuse for human rights abuses။ Al Jazeera America (December 3, 2015)။
↑ ၁၄၂.၀ ၁၄၂.၁ John Defterios (27 October 2014)။ CNN ISIS: Can coalition cut off funding of world's wealthiest terror group?။[လင့်ခ်သေ]
↑ "Gulf allies and 'Army of Conquest' Archived 19 September 2015 at the Wayback Machine.". Al-Ahram Weekly. 28 May 2015.
↑ ၁၅၆.၀ ၁၅၆.၁ "Saudi Arabia, UAE, Egypt and Bahrain break diplomatic ties with Qatar over 'terrorism'"၊ The Guardian၊5June 2017။
↑ ၁၆၀.၀ ၁၆၀.၁ ၁၆၀.၂ ၁၆၀.၃ The Strange Power of Qatar by Hugh Eakin။ The New York Review of Books။ 16 June 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Qatar Municipalities။ Qatar Ministry of Municipality and Urban Planning။ 22 December 2011 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 14 June 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Administrative Division of the State။ The General Census of Population and Housing, and Establishment Apr 2010။ State of Qatar Statistics Authority။ 28 October 2012 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 14 June 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၁၇၄.၀ ၁၇၄.၁ Qatar National Vision 2030။ Ministry of Development Planning and Statistics။ 13 November 2012 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။
↑ ၁၉၁.၀ ၁၉၁.၁ Simon Lincoln Reader (12 November 2013)။ Qatar shows how money can solve most problems။ Bdlive.co.za။ 30 December 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၁၉၂.၀ ၁၉၂.၁ History of Census in Qatar။ Qatar Statistics Authority။ 11 March 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 16 June 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၁၉၃.၀ ၁၉၃.၁ Population structure။ Qatar Statistics Authority (31 January 2013)။6October 2014 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 17 June 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၁၉၄.၀ ၁၉၄.၁ "Qatar's delicate balancing act"၊ BBC News၊ 16 January 2013။ 23 May 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Global Religious Landscape Archived 1 January 2013 at the Wayback Machine.. Pew Forum.
↑ ၂၀၇.၀ ၂၀၇.၁ Report on Qatar။ Cumorah Project။ 12 March 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၂၀၈.၀ ၂၀၈.၁ The Anglican Centre in Qatar။ Epiphany-qatar.org။ 16 January 2013 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 22 January 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၂၀၉.၀ ၂၀၉.၁ David B. Barrett; George Thomas Kurian; Todd M. Johnson (2001)။ World Christian encyclopedia:acomparative survey of churches and religions in the modern world။ 1။ Oxford University Press။ p. 617။ ISBN 978-0-19-510318-2။
↑ ၂၂၂.၀ ၂၂၂.၁ Qatar Freedom of the Press။ Freedom House။ 30 March 2019 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 19 January 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၂၃၀.၀ ၂၃၀.၁ Arts and Culture။ Embassy of Qatar in London။ 25 June 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ကာတာနိုင်ငံ&oldid=740470" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၉ ဧပြီ ၂၀၂၂၊ ၀၂:၁၉ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။